China OEM 3D nku anya mink lashes emebere aka etemeete ụlọ ọrụ zuru oke na ndị na -emepụta | Weiti
OEM 3D nku anya mink lashes ejiri aka mee etemeete warara zuru oke
1, ụdị asịrị eke DOLORES
2, 14mm 100% ezigbo ntutu mink
3, igbe nkwakọ ngwaahịa lashes ahaziri iche
4, Nnukwu ngwaahịa na ụgbọ mmiri dị njikere n'oge
1, Ụyọkọ Eke Ekepụrụ Eke na Ọkwa:Nku anya mink nke ọ bụla bụ nke ejiri aka mee. Ọ nwere mmetụta ịkwa akwa zuru oke, na -adọrọ adọrọ, na -egbu maramara. Enwere ike idozi ya n'ọnụ ya, mee etemeete mara mma. Kwesịrị ekwesị maka iyi kwa ụbọchị, oge ịse foto ememme.
2, Mink Fur nke enweghị obi ọjọọ.Anya nku anya anyị enweghị omume obi ọjọọ, nke a na-eji ajị ajị anụ Siberia mee, na-esite na ọdụ nke ntutu isi na-ada ada minks. Mgbe ahụ mee ka ọ dị ọcha ma tee mmanụ tupu etinye ha. Ka ọ dị ugbu a, warara mink lashes na -enwe ahụ iru ala karịa lashes sịntetik. Dị nro dị nro, gbagọrọ agbagọ, hypoallergenic, dị ka lashes eke mmadụ, ọ nweghịkwa iwe na anya gị.
3, Ejiri aka mee Band Band dị nro:Ahịrị ojii dị warara na -eme ka anya gị yie ka ọ na -enwe mmetụta eyeliner, mara mma ma maa mma. Enwere ike ijigharị ya ihe karịrị ugboro 20-25 na ezigbo nlekọta. Ọ naghị adịrị mfe ịdọpụ ya na eriri adịghị ogologo.
4, Ibu arọ- Enweghị Mmetụta:Otu nku anya mink ọ bụla dị naanị gram 0.5. Ibu “0” dị fechaa, enweghị mmetụta dị arọ. Yabụ na ị nweghị ike ịmanye ịdị arọ ya, mgbe ị na -eyi ya. N'otu oge ahụ, ọ dị mma ma bụrụ enyi maka anya nwere mmetụta ọsọ ọsọ ma ọ bụ onye na -eyi oghere oghere.
Nke gara aga: Ọkụ ọkụ 3D Mink nku anya N'ogbe 100% ezigbo Siberia Mink Lashes
Osote: Nnukwu nku anya ụlọ ọrụ na -ere ihe nkpuchi 3D nwere igbe nku anya nkeonwe
3D Eke anya 100% Mink nku anya
Anya nku anya ụgha
Mpekere zuru oke
Nnukwu anya lashes waterproof reusable Classic 3d ...
Akara mkpado nkeonwe 100% arụrụ aka arụrụala F ...
Fluffy N'ogbe 3D warara Mink ntutu ntutu emeputa ...
Nnukwu dị mfe itinye 3d 5d 100% Mink L ...
mink lashes, Mgbatị ntutu anya, eyeliner, Anya anya, egbugbere ọnụ, Ndị na -ere ntutu anya,